रविन्द्र अधिकारी र बास्कोटा प्रवृति र चिन्तनले कोरोनामाथि पनि प्रभाव जमाउँदै – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७६ चैत्र १७
ओली सरकारका ओलीद्धारा प्रभावशाली घोषित गरिएका ओलीका तत्कालिन पृर्वमन्त्रीहरु रविन्द्र अधिकारी र गोकुल बाष्कोटा प्रवृति, चिन्तन र चरित्र अहिले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको नाममा फेरी जाग्न थालेको छ । उनीहरुले ओली सरकारमा समाएको भ्रष्टाचारको व्यारोमिटर अहिले पनि घटेको छैन, झन बढने लक्ष्यण देखिदै छ । किनभने भ्रष्टाचार एउटा प्रवतिको रुपमा वर्तमानमा कोरोना भाइरसको रुपमा ओली मन्त्रीमण्डभित्र फैलिरहेको छ । नेपाली जनता एकातिर आइसोलेसन, क्वारेनटाइन र लकडाउनमा दिन विताउन बाध्य छ्न् तर ओली सरकारभित्र फैलिरहेको भ्रष्टाचारी भाइरस भने न आइसोलेसनमा छ नत क्वारेनटाइनमा नै । त्यो त निश्फिक्रि रुपले ओली सरकारको हरेक तह र तप्कामा जरा गाडन सफल देखिएको छ । र अहिले यो कोरोना भाइरससित आन्तरिक रुपले मित्रता कायम गरेर नेपालभित्र घूमिरहेको छ ।
नेपालबाट प्रकाशित गरिने विभिन्न अनलाइनहरुले ओली सरकारका वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कसरी नेपालको एउटा वदनाम कम्पनीसित मिलेर चीनको ग्ग्वान्जाओबाट कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अत्यधिक मूल्य तिरेर नेपालमा सामान झिकाउँदै छन् भनेर जनताको बीचमा यसलाई बाहिर ल्याउने प्रशंम्सनिय काम गरेका छन् । ती अनलाइनहरुले दिएका तथ्यांक अन«सार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले चिकित्सकले लगाउने १०लाख थान मास्क खरिद गर्ने स्विकृति दिएका छन् । त्यसवारे ती अनलाइनहरुको भनाइ के रहेको छ भने त्यो मास्कको मूल्य अहिले सरकारद्धारा ३८ रुपीयाँ तोकिएको छ जवकि नेपालमै अहिले बजारमा त्यसको मूल्य ७ रुपीयाँ पर्दछ । यसरी देशभित्रै ७ रुपीयाँमा पाइने मास्क चीनबाट ३८ रुपीयाँमा किन खरिद गर्नु परयो त ? उत्तर स्पष्ट छ यसभित्र लुकेको कमिशनको भागबण्डा । ओली सरकारका स्वाथ्य मन्त्रीको निर्देशनमा सरकारले प्रतिमास्क ३२ सेन्ट अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न लागेको छ र यो ३२ सेन्ट भनेको आजको डलर मूल्य अनुसार ३८ रुपीयाँ हुन आउँछ । जबकी यही गुणस्तरको मास्क नेपाली उत्पादकले अहिले बजारमा ५देखि ७ रुपयिाँमा बिक्रि गरिरहेका छन् । किन सरकारले करीब ६ गुणा बढी मूल्यमा किन्न थालेको हो ?
के स्पष्ट हो भने नेपालमै पनि निम्बस नामको कम्पनीले यही प्रकृतिको मास्क बनाइरहेको छ र उसले बजारमा यसको मूल्य ७ रुपीयाँ तोकेको छ । साथै यही गुणस्तरको मास्क अहिले बजारमा ५ रुपीयाँमा बिक्रि भइरहेको छ । अनि त्यही मास्कलाई ओली सरकारले चीनवाट ३८ रुपीयाँमा खरिद गर्न गइरहेको छ । नेपालका देशभक्त व्यापारीहरुले देशलाई अप्ठयारो परेको समयमा सस्तो मूल्यमा मास्क बनाएर बजारमा पठाइरहेको समयमा र त्यसलाई कसरी हुन्छ मात्रात्मक र गुणात्मक बृद्धि गर्दै लैजानुको बदलामा यो दलाल सरकारका मन्त्री र प्रशासकहरुले जनताको कठिन अवस्थाबाट फाइदा लिई नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि बम्ह्लुट गर्न थालेका छन् । मास्क त एउटा सानो सामान हो जसलाई नेपालभित्रै सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी मास्क बाहेक अन्य सामानमा पनि अत्यधिक मूल्य देखाएर सामान किन्न थालिएको छ । जसले यो सरकार भ्रस्टाचारीहरु, तष्करहरु र मेडिकलक्षेत्रका माफियाहरुको इशारामा चलिरहेको छ र विगतमा रविन्द्र र गोकुलजस्तै वर्तमानमा कोरोनाको नाममा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले आफूलाई संलग्न गराएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
उल्लेखित दावीहरुलाई अझ बढता स्पष्ट पार्नका लागि बिगत १५ वर्षदेखि चीनको गोनजाउ शहरमा अन्तराष्टि‘य ब्यापार गर्दै बसेका नवीन बिकले सामाजिक सञ्जालमा दिएका यी दररेटहरुले मद्त गर्दछन् जसमा उनले भनेका छन् –“तपाइले ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र तिनको जिन्दगी र भविश्यसंग खेलवाड गर्नु भएको छ । कोरोना टेस्ट पीपीआर किटमा मात्रै १४ करोड र चश्मामा १५ करोड, गाउनमा ११ करोड खर्च देखाउनु भएको छ । मैले त यहाँ केबल केही सामानको मात्र आँकडा छुटयाएको छु बाँकी त कति छन् कति ? किन यस्तो गर्नु भयो मन्त्री ज्यू । नेपालको कुनै पनि संघसस्था र प्रदेश सरकारले यी सामानहरु मगाउन परेमा म निम्न लिखित मूल्यमा सामान दिन तयार छु ।
उल्लेखित लेखलाई अझ बढता स्पष्ट पार्नका लागि चीनबाट नवीन बिकले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई लेखेको पत्र जस्ताको तस्तै राखिएको छ, जसले यो सरकार भ्रस्टाचारीहरु, तष्करहरु र मेडिकलक्षेत्रका माफियाहरुको इशारामा चलिरहेको छ र विगतमा रविन्द्र र गोकुलजस्तै वर्तमानमा कोरोनाको नाममा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले आफूलाई संलग्न गराएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
उक्त चीठीमा नवीन बिकले लेखेका छन्“म नबिन बिक बिगत १५ वर्षदेखि चीनको गोनजाउ शहरमा अन्तराष्टि‘य ब्यापार गर्दै बसेको छु । म एनआरएनको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ । मैले अहिलेको स्थितिमा केही नबोलीकन चुपचाप बस्न सकिन । किनकि तपाइले ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र तिको जिन्दगी र भविश्यसंग खेलवाड गर्नु भएको छ । कोरोना टेस्ट पपिीआर किटमा मात्रै १४ करोड र चश्मामा १५ करोड, गाउनमा ११ करोड खर्च देखाउनु भएको छ । मैले त यहाँ केबल केही सामानको मात्र आँकडा छुटयाएकाृ छु बाँकी त कति छन् कति ? किन यस्तो गर्नु भयो मन्त्र िज्यु । नेपालको कुनै पनि संघस.सथा र प्रदेश सरकारले यी सामानहरु म्गाउन परेमा म निम्न लिखित मूल्यमा सामान दिन तयार छु ।
एन ९५ मास्क चीनमा एक अमेरिकी डलर पर्छ भने नेपालले त्यसैलाई ७ डलरमा किनेको छ र संख्या जम्मा ८० हजार जसमा ४लाख ८० हजार डलर फरक पर्दछ । त्यसैगरी पर टेस्टीिग किटलाई चीनमा १० डलर नेपालले ३८ डलरमा किनेको छ । सोको संख्य ५० हजारमा फरक १४लाख डलर पर्न जान्छ । त्यस्तै आइआर थर्मोमिटरको चीनमा २५ डलर नेपालमा ६५ डलर, संख्या १५ सयमा फरक ६० हजार डलर हुन्छ । प्रोटेकटीभ गगल्सको चीनमा ३ डलर नेपालले १८ डलर संख्या एक लाख फरक १५ लाख डलर र त्यसैगरी डिस्पोजेवुल गाउन्स चीनमा ५ डलर नेपालमा १६ डलर संख्या एक लाख फरक एघार लाख डलर ।
यसले के स्पष्ट पारेको छ भने ओली सरकार दलाल र भष्टाचारीहरुको कब्जामा छ भन्ने प्रमाण त यो एउटा उदाहरणबाटै स्पष्ट हुन्छ जसमा अनलाइनहरुको दावी छ कि सरकारले किन्ने सबै सामाग्रीको मूल्य ६ हजार नेपाली रुपीयाँ परेको छ जवकी त्यही सामान नीजी क्षेत्रबाट १६ डलरमा मगाइएको छ र सो पनि चीनबाटै आउँदै छ भनिएको छ । यसरी नेपालका व्यापारीको नाममा केही दलाल नफाखोरहरुसित मिलेर सरकारले राज्यकोषको दोहन गर्न थालेको स्पष्ट हुन्छ । अर्को स्पष्ट उदाहरण पनि छ त्यो के भने सरकारले मगाएको चस्माको मूल्य सही मानेमा ४० रुपयिाँ पनि पर्दैन जवकी एउटा गुणस्तरीय चस्माको मूल्य १ डलरभन्दा बढी पर्दैन भने सरकारले उक्त चस्माको प्रति चस्माको मूल्य १८ डलर तोकेको छ । भनिन्छ जवकि १८ डलरमा त नीजि क्षेत्रका व्यावसागीले पीपीइ नै नेपाल भित्रयाउने तरारी गरिरहेका छन् । यसरी जे जसरी अहिले बाहिर आएका स्रोतहरु छन् तिनीहरुको अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रका व्यापारीले १६ डलरका दरले पीपीइ सेट, ३५ डलरका दरले थर्मामिटर, १ डलर ३६ सेन्टका दरले फेस मास्क मगाएका छन् र तर सरकारले किन्ने हरेक सामानको मूल्य मनलाग्दी रुपले तोकेको पाइएको छ । त्यसैगरी नेपालमै १० रुपीयाँ पर्ने डिस्पोजल सूज कभर सरकारले २ डलरमा किन्न थालेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको हस्ताक्षरमा यी सामान किन्न थालिएको बताइएको छ । उनको विगतको प्रशासनिक छवी मन्त्रीलाई पनि आर्थिक लोभमा पार्ने र आफूले पनि कमाउने रहदै आएको छ ।
ओली सरकारले (वास्तवमा यो अब इश्वर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार बनेको छ) यतिसित मिलेर देशको प्राकृतिक स्रोतको बम्ह्लुटको योजना बाहिर आएको त स्पष्ट छ अहिले यसले अर्को भ्रस्ट ओम्नीटेक कम्पनीसित मिलेर कमिशनका लागि कसरत गरिरहेको छ । विशाल पण्डित नामका ती व्यापारीको नामको ओम्नीटेक कम्पनीले विगतमा पनि यस्ता उपकरण खरिदमा अनगिन्ती अनियमितता गरेर अख्तियारमा समेत उजूरी परेको कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीलाई इश्वर पोख्रेल र भानुभक्त ढकालले अहिले अगाडि सारेर नेपालका यति, वाइडबोडी प्रकरणजस्तै बाट अरवौ कमाएरको ओली सरकारले अहिले ओली सरकारका स्वासेस्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले रविन्द्र अधिकारी र गोकुल बास्कोटाको मार्ग अनुसरण गरेको देखिन्छ ।
ओलीका पृयपात रविन्द्र अधिकारी र गोकुल बास्कोटाको मार्ग के थियो, स्पष्ट भएको छ र अब भानुभक्त ढकालको पनि त्यही हविगत हुने स्पष्ट छ । रविन्द्र अधिकारी र गोकुल बास्कोटाजस्ता भ्रष्टहरुलाई जोगाउन ततकालका लागि ओली सफल देखिएका छन् । तर नेपाली जनताले कति दिनसम्म यस्ता भ्रस्टहरुको सरकारको राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको ब्रम्ह्लुट टुलुटुलु हेरेर बस्ने छन् । यस्ता भ्रष्टाचारीहरु माथिको कारवाहीलाई आतङकवादी कारवाही देख्ने नेकपाका नेताहरु पनि यी र यस्ता प्रकारका कमिशनबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सेदारीमा सहभागि त छैनन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसरी के स्पष्ट भएको छ भने रविन्द्र अधिकारी र बास्कोटा प्रवृति र भ्रस्टाचारी चिन्तनले अहिले कोरोनामाथि पनि प्रभाव जमाउँदै छ । ओली सरकारका मन्त्रीहरु कोरोना रोकथामलाई आधार बनाएर व्यापक भ्रस्टाचारको जालोलाई वैधानिकता दिने कसरतमा लागेका छन् ।